सुहागरातका दिन जेठाजुले बलात्कार, श्रीमानले सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि…. | Rajmarga
सुहागरातका दिन जेठाजुले बलात्कार, श्रीमानले सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि….
भारतको केन्द्रीयस्तरमा एकातिर संसदमा तीन तलाकसम्बन्धी कानुन बनाउन विधेयक पेस गर्ने तयारीमा छ भने अर्कातिर उत्तर प्रदेशको बुलंदशहरमा एउटी महिलाको पीडादायी घटना सार्वजनिक भएको छ। पीडित महिलाको उजुरीमा प्रहरीले उनको जेठाजु र श्रीमानसहित अन्य एक व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छ।
घटना बुलंदशहरको कोतवाली देहत क्षेत्रको हो । प्रहरीमा दर्ता भएको उजुरीमा पीडितको विवाह बुलंदसहरमै १ डिसेम्बरमा राशिद नामको युवकसँग भएको थियो । तर, २ डिसेम्बर राति उनीमाथि दर्दनाक घटना भयो ।
पीडितका अनुसार २ डिसेम्बर राति उनी सुहागरातको तयारीमा थिइन् । तब कोठमा उनका श्रीमान ठुलो दाई एक जना साथीका साथ प्रवेश गरे। र, छुरा देखाएर उनीमाथि सामूहिक बलात्कार गरे । त्यति मात्र होइन, बलात्कारको अश्लिल भिडियो समेत बनाए ।
भारतीय पत्रिका दैनिक जागरणका अनुसार पीडितलाई जेठाजुले यदि यो घटना कसैलाई बताए उक्त अश्लिल भिडियो सार्वजनिक गरिदिने धम्कीसमेत दिए । पीडितका लागि यसबाट थप समस्या सिर्जना भयो । तैपनि उनले अर्को दिन आफ्नो श्रीमानलाई घटनाबारे बताइन् । तब श्रीमानले उल्टै उनीमाथि कुटपिट गरेर तीन तलाक भनेर घरबाट निस्किए ।
त्यति मात्र होइन पीडितका श्रीमान राशिदले उनीसँग विवाह आफ्नो दाइका लागि गरेको समेत बताए । राशिदका अनुसार उनको विवाह त पहिला नै भइसकेको थियो । एसएसपीको आदेशमा पीडितका श्रीमान, जेठाजु र अन्य एक जनालाई पक्राउ गरी छानविन सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। एजेन्सी
Previous post: अप्पर नौगाड अन्तिम चरणमा, चैतदेखि नै विद्युत् उत्पादन थाल्ने
Next post: खतरातर्फ उपत्यकाको मानवजीवन: वायु खतरनाक, २४ सै घन्टा श्वास फेर्न अनुपयुक्त